Uvavanyo lweFlight: Uvavanyo lwe-Beta lwe-iOS kunye nokuBeka esweni ngokuSebenza | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 4, 2020 NgoLwesine, uJuni 4, 2020 Douglas Karr
Uvavanyo lwesicelo esiphathwayo linyathelo elibalulekileyo kuko konke ukuthunyelwa kwesicelo esiphathwayo. Ngelixa izicelo eziphumelelayo zeselfowuni zinokubandakanyeka okumangalisayo kunye nokubonelela ngexabiso elikhulu kubathengi nakumashishini ngokufanayo, isicelo se-buggy mobile asiyontlekele onokuyilungisa ngokulula.
Ukuhanjiswa kwe-app eyaphukileyo okanye usetyenziso olunokusetyenziswa gwenxa kuya kunciphisa ukwamkelwa, ukuphakama koqwalaselo olubi ... kwaye ke xa ulungisa iapp, usemva kwebhola.
Ngaphakathi kwendawo ye-Apple yophuhliso lwesicelo, kubandakanya i-iPhone, i-iPad, iPod touch, iApple Watch, kunye neApple TV, isisombululo sokuvavanywa kwe-beta kunye nokufaka iibugs kunye nemicimbi yamava omsebenzisi yile Uvavanyo.
I-Testflight liqonga lokuhanjiswa kwesicelo se-beta apho unokumema abasebenzisi ukuba bavavanye usetyenziso lwakho. Oku kwenza ukuba iqela lakho lichonge iibugs kwaye liqokelele ingxelo ebalulekileyo ngaphambi kokukhupha iiapps zakho kwiVenkile ye App. Nge-Testflight, ungamema abavavanyi abali-10,000 XNUMX usebenzisa iidilesi zabo ze-imeyile okanye ngokwabelana ngekhonkco eluntwini.
Uluhlu lokuKhangela kuvavanyo lweSicelo seMfono
Kukho imiba eliqela enokuchongwa kuvavanyo lweSicelo seSelfowni ekufuneka uyithathele ingqalelo:
ukuhambelana Izigqibo zesikrini, imiba yokubonisa kunye neendlela zemowudi kunye neefoto, iinguqulelo zenkqubo yokusebenza zinokuchaphazela ukusebenza kwesicelo sakho kakuhle.
Izimvume -Uneemvume ezisetiweyo kwaye zilungiselelwe ukufikelela kwiifowuni (iifayile, ikhamera, isantya, ngaphandle kwamacingo, i-wifi, iBluetooth, njl.
bandwidth Uninzi lweeapps zidityaniswe nelifu, ke uya kufuna ukuqinisekisa ukuba i-bandwidth esezantsi ayichaphazeli ukusebenza kwesicelo… okanye ubuncinci yazise umsebenzisi ukuba kunokubakho ukusebenza okuthobekileyo. Unokufuna ukufumana abasebenzisi abanonxibelelwano lwe-2G kuphela ukuya kwi-5G.
Ukusabalala -Ukuqaliswa kwesicelo okuninzi kunye nephulo lokuthengisa elinomtsalane elijikeleze ukuthunyelwa. Wonke umntu uyasayina kwaye isicelo siyaphazamiseka njengoko iiseva zakho ezihlanganisiweyo zingenakho ukuthatha uxinzelelo. Uvavanyo lomthwalo kunye nokukwazi kwakho ukukala nokusombulula imiba yoxinzelelo kubalulekile.
ezimqoka -Bhala amabali abasebenzisi ngendlela okholelwa ngayo ukuba abasebenzisi kufuneka banxibelelane nesicelo sakho kwaye ujonge indlela abanxibelelana ngayo. Ukurekhodwa kwesikrini yindlela entle yokuchonga apho ukudideka kunokuba khona kunye nendlela onokuphinda uqwalasele izinto ukuqinisekisa ukusetyenziswa okunomdla.
Uhlalutyo -Udityaniswe ngokupheleleyo ne-SDK yohlalutyo lweselula ukubeka esweni ukubandakanyeka kwe-app yakho ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye? Uyayidinga loo nto-hayi eyokusebenziseka nje kuphela, kodwa ikwaquka nakuphi na ukubekwa kweliso kuhambo lwabathengi kunye neetriki zokuguqula.
Indawo -Sisebenza njani isicelo sakho kwiindawo ezahlukeneyo zejografi kunye neelwimi ezahlukeneyo ezibekwe kwisixhobo?
Izaziso Ngaba ukhe wazivavanya ngaphakathi nohlelo ukuqinisekisa ukuba ziyasebenza, zinokuqwalaselwa ngokufanelekileyo, kwaye zilandelelwe?
ukuchacha -Ukuba (kwaye nini) xa isicelo sakho senzekile okanye siphuka, ngaba uyayibamba idatha? Ngaba umsebenzisi angaphola engozini ngaphandle kwemicimbi? Ngaba banokwenza ingxelo ngemicimbi?
ukuthobela - Ngaba isicelo sakho esiphathwayo sikhuselekile, zonke iziphelo zalo zikhuselekile, kwaye ziyahambelana ngokupheleleyo nazo zonke iimfuno zolawulo ngaphambi kokuba uphile? Ngelixa uvavanya i-beta, ufuna ukuqiniseka.
Ukutyala ixesha elininzi kuvavanyo kuya kuqinisekisa ukuphunyezwa kwesicelo esiphathwayo. I-Testflight sisixhobo esibalulekileyo kwi-ecosystem ye-Apple ukuqinisekisa ukuba isicelo sakho sisebenza ngokufanelekileyo, ukuxhomekeka kwikhowudi efanelekileyo, kwaye isicelo sakho siya kufumana ukwamkelwa ngokukhawuleza kunye nokusetyenziswa ngokubanzi ngabaphulaphuli bakho.
Umbane woVavanyo lweApple
tags: uhlalutyo lweappi-app bandwidthukuhambelana kweappukuthobela usetyenzisousetyenziso lwasekhayaukubuyisela usetyenzisousetyenziso olungenakulinganiswaUkusetyenziswa kweappUvavanyo lwe-iosUkuhanjiswa kweappsUvavanyo lwe-app ye-iphoneUvavanyo lwe-beta lwe-iphoneusetyenziso lweselulauvavanyo lweflighttestflight phila